LEGO တိုင်းကိုသြဂုတ် ၁ ရက်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းစတင်ဖြန့်ချီသည်
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 492 Views စာ0မှတ်ချက် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန်, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား, 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 71388 သူဌေးက Sumo Bro Topple မျှော်စင်ချဲ့ခြင်းအစု, 71389 Lakitu က Sky ကမ္ဘာ့ချဲ့စက်, 71390 Reznor Knockdown တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ, 71392 ဖားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71393 ပျားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71394 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 3, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Mandalore အပေါ် 75310 Duel, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, ထိန်းချုပ်မှု +, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego Marvel, Lego ရာသီအလိုက်, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, LEGO.com, Marvel, ရာသီဉတုလိုက်သော, စျေးဝယ်, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အသစ်စက်စက်နှစ်ဒါဇင်ကျော် Lego အစုံများကိုယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ဖြန့်ချီသည် Marvel, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ နှင့်ပိုပြီး။
အမေရိကန်ပရိတ်သတ်များအတွက်သြဂုတ်လ ၁ ရက်သည်အမေရိကန်တွင်အကြီးမားဆုံးစျေး ၀ ယ်နေ့ဖြစ်သည် Lego st ကတည်းကပြက္ခဒိန်art ဇွန်လ၏လှိုင်းလုံးများနောက်ဆုံးတွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှတစ်နှစ်တာ၏။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အခြားသူများအတွက်ကောက်ရန်ပစ္စည်းအသစ်များစွာရှိသေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အခမဲ့ 200 ရွက်လွှင့်စွန့်စားခန်းတစ်ခုရရန်£ 200 / $ 200 / € 40487 ကိုကျော်ရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။
စာရင်းအပြည့်အစုံသို့ကြည့်ပါ Lego ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအားလုံး၏ link များနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းတွင်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖြန့်ချီသည်။ သတ်မှတ်နာမည်တစ်ခုစီသည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည် LEGO.com။ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့် - ဒီပြည့်စုံတဲ့စာရင်းများအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ် Lego သူတို့အားမဆိုတ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်စင်ပေါ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအကြာအငြိမ်းစားယူခြင်းသည် ၂၀၂၀ တွင်ခေတ်တစ်ခု၏အဆုံးသတ်ကိုအမှတ်အသားပြုခဲ့သည် Lego Group သည်၎င်း၏ကွာခြားချက်ကိုယာဉ်၏လက်တွေ့ဘ ၀ ဆက်ခံသူနှင့်၎င်း၏အစုရှယ်ယာများတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် | ပြန်လည်သုံးသပ်
VIP စောစောသုံးခွင့်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ဘာမျှမရှိသောအစုသည်နောက်ဆုံးတွင်သြဂုတ်လတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင် p ဖြစ်သည်ဖြစ်စေသင်ယခုယူနိုင်သည်။art ၏ Lego Group ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်။
၂၁၃၂၈ Seinfeld | ပြန်လည်သုံးသပ်
နှစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? mechs နှင့် Avengers: Endgame ခေါင်းစဉ်မှဤအပိုဆုသုံးပုဒ်၏ခေါင်းစဉ် Marvel ဥရောပ၌ရရှိနိုင်သောအစောပိုင်းနွေရာသီလှိုင်းများပေါ်တွင်တိုးချဲ့ထားသောအစုံ။
76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man
76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard
76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper | ပြန်လည်သုံးသပ်
-ဂုတ်လအတွက် Halloween-inspired အတွဲတစ်စုံသည်သြဂုတ်လတွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်သည်၊ သင်အားကြီးသောနေ့မတိုင်မီသိုလှောင်ရန်အချိန်များစွာပေးသည်။
နှင့် Star Wars လာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေရာသီသည်အနာဂတ်၏အုပ်ချုပ်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသောရုပ်ရှင်များဖြစ်သည် Lego မှုတ်သွင်းအစုံ Disney+ တီဗီရှိုးများ။ အတွဲ ၁၈+ စုံတွဲတစ်တွဲသည်အစွန်အဖျားတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့ရဲ့စုပေါင်း ဦး ထုပ်တွေကိုလည်းပေးလိုက်ပါတယ် အဆိုပါ Skywalker Sagaသို့သျော။
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship | ပြန်လည်သုံးသပ်
Mandalore အပေါ် 75310 Duel | ပြန်လည်သုံးသပ်
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder | ပြန်လည်သုံးသပ်
75312 Boba Fett ရဲ့ Starship | ပြန်လည်သုံးသပ်
75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း | ပြန်လည်သုံးသပ်
75315 Imperial အလင်း Cruiser | ပြန်လည်သုံးသပ်
၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter | ပြန်လည်သုံးသပ်
Lu-gi- ငါပဲ။ အတွေ့ရနည်းသော Mario Bro သည်ပူးပေါင်းသည် Lego စူပါမာရီယို line-up သည်အမှတ်တံဆိပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံအသစ်နှင့်ကစားသူပေါင်းများစွာကိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သောတည်ဆောက်နိုင်သောဗီဒီယိုဂိမ်းသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။
Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း
71388 သူဌေးက Sumo Bro Topple မျှော်စင်ချဲ့ခြင်းအစု
71389 Lakitu က Sky ကမ္ဘာ့ချဲ့စက်
71390 Reznor Knockdown တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်
71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ
71392 ဖားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို
71393 ပျားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို
71394 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 3
အသစ်နှစ်ခုရှိတာပဲ နည်းပညာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည် pneumatics ပါ ၀ င်သောအရာတစ်ခုနှင့် CONTROL+ပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ကလိဂ်အေပီart စျေးနှုန်းအရသော်လည်းအလွန်ကွဲပြားသောအထုပ်များကိုပေးသည်။
42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား
421294×4Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား